गाईलाई पीठो बोकेर प्रदेशमन्त्री पुग्दा ... - Nepalese Times
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित)2मिनेट अघि
खानेपानी कार्यालयका हाकिमलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले नाङ्गेझार पारेर यसरी गाउँ घुमाए, कारण यस्तो ! 58 मिनेट अघि
गाईलाई पीठो बोकेर प्रदेशमन्त्री पुग्दा …
नेप्लिज संवाददाता ३० श्रावण २०७८, शनिबार १६:४४ (2 महिना अघि) २७५ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । असहाय गाईबाच्छा संरक्षण अभियानले वरिपरि फलामे तारले घेरिएको ठूलो चौरमा एक सय ५३ असहाय गाईबाच्छा जम्मा गरेर पालन पोषण गरेको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटारमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो जग्गामा अभियानले सडकमा खुला छाडिएका गाईबाच्छालाई राखेको हो । आज वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँल आफैँ एक बोरा पीठो बोकेर पुगे ।
विसं २०७५ जेठ १ गते मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, वाग्मती सफाइलगायत अभियानमा लागेका उत्तम पुडासैनीले सो अभियान सुरुआत गरेका थिए । सुरुमा त्रिभुवन विमानस्थलसँग जोडिएको वाग्मती नदी किनारको भागमा गाईबाच्छा जम्मा गरिएको थियो । विसं २०७६ चैतमा बन्दाबन्दी जारी गरिएका बेला सडकमा बेवारिसे गाईबाच्छाको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो ।
तत्कालीन समयमा कोषले अभियानलाई गौशाला बनाउन चरन क्षेत्रसहित पुग्ने गरी एक सय रोपनी जग्गा मौखिक सहमतिका आधारमा उपलब्ध गरायो ।
त्यहाँ हाल सडकमा छोडेपछि दुर्घटनामा परेका, कुकुर लगायतले लखेटेर घाउ बनाएका, विभिन्न रोग लागेर सडकमै ढलेका गाईलाई संरक्षण गरिएको छ । गाई संरक्षण अभियानमा केही स्वयंसेवी निरन्तर रुपमा खटिँदै आएका छन् ।
विभिन्न उदारमना व्यक्तित्वले गर्नुभएको सहयोगले यो अभियान टिकेको छ । अभियानमा मन्त्री फुयाँलले आज बिहानै आफैँ गाईका लागि पीठो बोकेर पुग्नुभएको हो । संरक्षणस्थलमा केही बेर उनले श्रमदान पनि गरे । गौशाला परिसरको सो जग्गामा उनले पीपलको रूखसमेत रोप्नुभएको छ । गौशाला परिसरमा उनले राष्ट्रिय झण्डाको झण्डोत्तोलन पनि गरे ।
अभियानलाई उनले २०७५ साल जेठमै आधा महिनाको तलब दिएर सहयोग गरेका थिऐ । यसले असहाय गाईबाच्छा संरक्षणलाई बीज स्रोतको काम गरेको अभियानकर्मी पुडासैनी बताउनुहुन्छ । असहाय गाईबाच्छा संरक्षणका लागि वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि असहाय गाईबाच्छा संरक्षण अभियानका लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर काम गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
आजै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार विदुर ढुङ्गानाले पनि रु सात हजार सहयोग गरेका छन् । पछिल्लो समय जन्मदिनमा असहाय गाईबाच्छालाई पीठो, दाना, घाँस वा नगद नै दिएर सहयोग गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको अभियानकर्मी पुडासैनीले सुनाउनुभयो । यस्तो अभियानमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति नेपालसहित सयौँ व्यक्तित्व सहभागी भइसकेका छन् ।
अभियानकर्मी आफ्ना व्यक्तिगत काम छोडेर असहाय गाईबाच्छा संरक्षण कर्ममा जुटेका छन् । वडा सदस्य अष्टलाल श्रेष्ठ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम अभियानकर्मीबाट भएको बताउछन् । यस्तो अभियानलाई स्थानीय सरकारले निरन्तर सक्ने सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
अभियानले सो स्थलमा पाँच सय गाईबाच्छालाई संरक्षण गर्न सक्ने संरचना निर्माण गरिरहेको छ । घाइते गाईबाच्छालाई उपचारका लागि छुट्टै उपचारस्थलको समेत निर्माण हुँदैछ ।
असहाय गाईबाच्छाको संरक्षणसँगै कम्पोष्ट मल उत्पादन पनि सुरु गरिँदै छ । यहाँ उत्पादन गरिने कम्पोष्ट मल बजार मूल्यभन्दा आधामै उपलब्ध गराइने अभियानकर्मी पुडासैनीले जानकारी दिए ।
गौधाम वरपरको भागमा टिम्बुर, फलफूललगायत जडीबुटी रोपण अभियान पनि सुरु भएको छ । गाईसँगै औषधिजन्य वनस्पति रोपेर जडीबुटीका क्षेत्रमा समेत काम गर्न लागिएको हो ।
अभियानसँग जनावर उद्धार गर्ने एम्बुलेन्स नहुँदा खरिपाटीमा बूढीगाई घाइते भएको खबर पाएर पनि केही गर्न नसक्दा रातभर सुत्न नसकिएको अभियानकर्मी पुडासैनीकाे गुनासो छ ।